Ihe niile gbasara koodu reusable? er ... Ọdịnaya | Martech Zone
Ihe niile gbasara koodu reusable? er… Ọdịnaya
Wednesday, July 15, 2009 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Bọọlụ Lorraine
Abụghị m techy! Ọ bụghị n'ezie, mana m na-etinye oge dị ukwuu na ndị ọkachamara na teknụzụ, dị ka onye ọbịa m, Douglas Karr. Otu n’ime ihe mmụta kachasị mkpa m mụtara n’aka otu n’ime ndị mmemme mụ na ya rụkọtara bụ uru ọ bara inwe koodu eji emegharị emegharị. Ọ bụ ezie na ndị ahịa ọ bụla nwere mmasị iche na ha pụrụ iche, ọ kọwara ozugbo ị dee koodu iji gbanwee usoro, ihe karịrị otu ndị ahịa ga-enwe ike iji usoro na koodu ahụ.
Otu echiche nke reusable koodu metụtara ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche gụnyere ahịa. Mụ na ndị nwere obere azụmaahịa na-arụsi ọrụ ike na-ekwu na ha enweghị oge iji dee ọdịnaya ọhụụ maka blọọgụ ha ma ọ bụ weebụsaịtị ha, egosiri m ha otu esi etinye mgbagha nke koodu a na - emegharị emegharị. Iji maa atụ: Mgbasa ozi pịa ma ọ bụ ozi ịntanetị ezigara na nzaghachi nye ajụjụ ndị ahịa na-aghọ akwụkwọ akụkọ, post blog na tweets. Enweghị ihe mere ị ga-eji megharịa wiilị ahụ, weghachite ihe edere. Mgbe ụfọdụ koodu? ma ọ bụ ọdịnaya chọrọ ntakịrị tweaking maka blọọgụ ma ọ bụ ndị na-ege ntị ala, ma ozugbo ị nwere ntọala nke fọdụrụ dị mfe.
Na m, mfe bụ isi okwu. Ọ gwụla ma ị bụ ọkachamara edemede ma ọ bụ blogger, ngwaọrụ ndị a, WordPress, Twitter, Plaxo, Enyi na enyi, niile bụ ihe na njedebe. Na njedebe ya bụ mụbaa mmasị na ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ akara gị. N'iburu ebumnuche ahụ n'uche, ndị otu m na-achọgharị oge niile maka ngwa ọrụ ọhụụ ọhụụ iji mee ka usoro a dị mfe ma mezie ya. O yikwara ka ọ bụ n’ime izu ole na ole ụfọdụ ka mmadụ malitere ihe ọhụrụ. Ugbu a, ọkacha mmasị m bụ TweetDeck na Tweet mechara.
TweetDeck ? N'ihi na anyị na-ejikwa ọdịnaya maka ọtụtụ akaụntụ ndị ahịa, enwere m mmasị n'eziokwu na m nwere ike ịmepụta otu kọntaktị ma ọ bụ nyocha omenala maka ndị ahịa ọ bụla. Ihe kachasị ọhụrụ na-enye m ohere ịgbanwe ngwa ngwa site na onye ọrụ gaa na onye ọrụ maka mmekọrịta oge.
Nke a bụ ụdị mmekọrịta m kachasị mma na Twitter, mana enweghị m ike ịnọ ebe niile n'otu oge, yabụ ana m adabere na TweetLater iji dobe anya m mgbe m na-enweghị ike ịnọ ebe ahụ. Anaghị m eji nke a maka akaụntụ Twitter nke m, mana ọ dị egwu maka ndị ahịa dịka ụlọ ọrụ ọzụzụ nwere ọkwa na mmelite klaasị oge niile. Inye ndị ọrụ na ọrụ ahụ, anyị nwere Tweets kwa ụbọchị haziri site na ngwụcha Septemba. M nwere ike na-awụlikwa elu na mgbe m nwere oge, ma TweetLater ekwusi a isi larịị nke ọrụ m.
Otu echiche ikpeazụ, ọ dị mfe ịnwe nhọrọ niile. Ntụnye m, họrọ ole na ole na-arụ ọrụ, ma jiri ha nke ọma na ha ga-arụpụta nsonaazụ.
Tags: enyi enyiPlaxoTweetdeckTwitterWordPress
Na-etinye Mobile n’ime Usoro Mgbasa Ozi N’èzí
Ọdịnihu nke vidiyo vidiyo na ọchụchọ dị ebe a!